Twin Seoul nesigaba esigabeni sesibili ne "test" kuyinto
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba esigabeni sesibili ne "test" kuyinto
Kusukela kokuhlangana indlela
twin Seoul uthole [3500 yen asihlole Mahhala] a ngemilingo yangempela, uma uzama ukubuyela omunye umphefumulo futhi, kuthiwa qiniseka ukuba adabule izigaba eziyisikhombisa. Ngo esigabeni sokuqala ukuqaphela nomunye, futhi imibuzo kakhulu nokuvuka ngokomoya, kodwa udlule isikhathi ngeke sigaba ngokuthi "isivivinyo" ka esigabeni sesibili.
Lokhu kuthiwa ngowokuqala avele sizi ku ababhekene izigaba eziyisikhombisa. Uma esedlule ngomqondo ongokomoya, isigaba ukubhekana inkinga yangempela esigabeni sesibili. "Test", kuyilapho azi ukuthi bakhangane kakhulu komunye nomunye, wukuthi by kucatshangelwa inkinga yangempela inikezwe omunye sizi uqhubeka kanjani esigabeni esilandelayo.
kuze kube manje ngoba abantu ababili ababefike ukuphila ehluke ngokuphelele, ngeke ukwazi ukuba ibe ngomunye kalula ngakho ngisho nomphefumulo uzakwabo. Kuze kube manje ye ukuzazisa esiye sihlakulelwe ngamunye yokuphila, siyophuma lokho kukudikibalise kolayini ukushiya ngomqondo wokuthi etholwe esigabeni sokuqala.
ngesikhathi lokuqala sizi
? isipiliyoni kanye esigabeni yolwazi yesibili Kaowodasu
twin Seoul Twin Seoul ngamunye uthando isipiliyoni lusetshenziswa, Awakening okungokomoya okwakwenziwa nakho esigabeni sokuqala ukhohlwe izothola. Lena, kunalokho elithi umphefumulo uyikho shayela nomunye, isipiliyoni kanye nolwazi etholakala lapho uye waphila ngokuvumelana manje ukuze kungene ukugcizelela imizwa.
? nokuthi uhlulekile othandweni njengoba sengiye ngazizwela indlela
bonke owake thanda etholwe imprinting ka ngendlela le, yinceku samanje ezifana UBANI OBUSA eziphoqelelwe bebodwa ngenxa yalesi senzakalo Xiang. Ngakho ukukhuluma, yilokho uselokhu engqondweni ngendlela yokuthi imprinting. Ukuzizwa ezithatha nomunye ngokuqinile komunye nomunye ku
esigabeni sokuqala, kuyoba fade ngu khumbula lokhu imprinting. Khona-ke, ungakwazi ukugxeka ukuthi elinye eqembu ngesisekelo the imprinting, futhi Movement, ezifana noma ekukhathazekeni banambitha esikhathini esidlule lothando bagcina ubambe umuzwa umona nokungethenjwa ukuthi uyovela.
? ukuzazisa ekumelaneni ngokumelene nalo liye ayetshalwe nzima
kokwake ukuzazisa akuhloselwe seziphelile kalula kanjalo. Omningi yeleyo ukuzazisa, ngeke bakwazi ukunciphisa ibanga phakathi umphefumulo abangamawele. Kulesi sigaba, kumnandi ukuzizwa ngenxa ubuhlungu isikhathi sokuqala isici esiyinhloko esigabeni sesibili.
umphefumulo twin nomunye, kungakhathaliseki ukuthi inganqoba sizi onqotshwa kulesi sigaba sesibili alahlwa esikhathini esizayo lokhiye
akhe ego, ubelokhu ngokuvamile kunzima. Ngenxa yalesi sizathu, umphefumulo twin yokukhathazeka eqinile nokuhlupheka esigabeni esilandelayo, futhi ngeke sizibonele ngokuhlukana.
akuvamile, ukukhathazeka nokuhlupheka ukusula sizi e esigabeni sesibili, kodwa ungase uqhubeke kuze kufike esigabeni kuso ngaphandle ukunyathela ukwehlukana esigabeni, kungaba ngcono uma singalindeli okukhulu kakhulu. Kungakhathaliseki noma cha zinganqotshwa bonke lobo bunzima, kuyothiwa ezaqhubekela esigabeni esilandelayo.
Kungase uqhubeke kuze kufike esigabeni kuso ngaphandle ukunyathela i-di, kodwa cishe akufanele balindele okukhulu. Kungakhathaliseki noma cha zinganqotshwa bonke lobo bunzima, kuyothiwa ezaqhubekela esigabeni esilandelayo.